MASHIINKA NADIIFINTA LEH LIINTA IYO TOONTA: SIDA LOO DIYAARIYO DAAWEYNTA DADWEYNAHA SI LOO YAREEYO KOLESTAROOLKA, SIDA LOO QAATO TINCTURE, SIDA LOO SAMEEYO ISKU DAR AH SIDA KUDHEERAANTA CAADIGA AH? - BEER CAGAARAN
Waa maxay iskuxidhka waxtarka leh ee liinta iyo toonta mashiinka nadiifinta? Raadi tinctures iyo talooyinka loo isticmaalo
Waxaa ka mid ah cudurada badan waxaa jira hal cudur oo aad u xanuun badan - atherosclerosis. Waxay ka kooban tahay lafdhabarta halbowlayaasha leh isku-darka lipid taasoo faragelinaysa shaqada caadiga ah ee habka wareegga dhiigga.
Sameynta hab nololeed aan caafimaad lahayn oo jidhkeena aan caadi ahayn, cunno badan oo cuntooyin dufan leh oo dufan leh - dhammaantood waxay keenaysaa "wasakheynta" ee maraakiibta dhiigga, iyo natiijada, cudurka wadnaha iyo xubnaha kale. Sidaa darteed, nadiifi jidhka adoo isticmaalaya daaweyn cadaadis ah oo la xaqiijiyay.
Qalabkani ma caawin karaa?
Daawo dhaqameedku aad ayuu uga weyn yahay dhaqanka. Cunnooyinka lagu tijaabiyey qarniyo badan ayaa caan ku ah maanta. Habka loo isticmaalo isku dar ah toon iyo liin ayaa si ballaaran loo isticmaalaa maraakiibta nadiifka ah.. Nidaamkan nadiifinta ayaa la xaqiijiyay inuu yahay natiijo aad u fiican oo ku saleysan sifooyinka bogsashada ee cuntooyinkaas.
Qalabka waxtarka leh ee alaabta
Isku daridda liinta iyo toonta waxay keenaysaa natiijo aad u fiican oo nadiifinta iyo weelasha bogsashada, laakiin mid kasta oo ka mid ah alaabooyinkaasi si gooni ah maaha wax faa'iido leh.
Qodobo waxtar leh oo toon ah:
yareeyo marinnada dhiigga, sababtoo ah bacriminta suufideed ee ku jirta khudradda;
waxay kordhisaa dhajinta derbiga vascular;
wuxuu yareynayaa culeyska muruqa wadnaha;
waxay ka hortagtaa sheyga waxyeelada leh ee gelaya dhiigga;
waxay hoos u dhigtaa kolestaroolka dhiigga;
xayiraa dhiigga wuxuuna leeyahay kahortagga weerarada wadnaha iyo foosha;
waxay ka hortagtaa dhacdooyinka atherosclerotic qaababka, iyo sidoo kale la tacaalida kuwa jira.
wuxuu saaraa xeryaha sunta ah iyo walxaha dheef-shiid kiimikaadka dhiigga;
wuxuu xoojiyaa derbiga vascular, wuxuu hagaajiyaa bacriminta;
wuxuu kala qaybiyaa kolesteroolka, wuxuu xakameynayaa heerka uu ku jiro dhiigga;
waxay ku dagaalamaan kaydka lipid on darbiyada gudaha ee xididdada dhiigga iyo halbowlayaasha, waxay ka hortagtaa horumarinta atherosclerosis.
Tilmaamaha loo isticmaalo isku dar ah toon iyo liin waa:
joogitaanka daboollada atherosclerotic ee derbiyada xididdada dhiigga;
jilicsanaanta iyo daciifnimada xididdada dhiigga;
Isku dar ah oo toon ah iyo liin waxay leeyihiin qaar ka horjeeda:
alerjiga mid ka mid ah alaabta;
uurka iyo xilliga nuujinta;
cudurrada kalyaha iyo beerka;
boog-galka iyo boogaha duuduubka iyo cudurrada kale ee mareenka caloosha iyo mindhicirka;
xanuunka loo yaqaan 'pancreatitis'.
Mudo intee le'eg ayaa koorsada daaweynta?
Muddada daaweynta cudurka bukaanka kasta waxaa loo xushay si gooni ah.. Waxay ku xiran tahay da'da bukaanka, qaabka nolosha, xaaladda xuubka, dhiigga.
Celceliska koorsada daaweynta leh isku dar ah oo toon ah iyo liin waa 4-5 toddobaad.
Qeyb muhiim ah oo nadiifinta markabka waa cabitaan ku filan.. Waa lagama maarmaan in si sax ah looga saaro xeryaha sunta ah ee jirka.
Sida loo diyaariyo qalabka guriga?
Aan aragno fiiro soo dhaweyn ah - sida loo diyaariyo daaweynta dadka, daaweyn isku dhafan si loo yareeyo cadaadiska dhiigga iyo kolestaroolka, in la nadiifiyo marinnada dhiigga ee maskaxda.
Qeyb ka mid ah qashinka caadiga ah, waxaad u baahan doontaa 4 liin iyo 4 madax oo waaweyn oo toon ah.
Lamanaha waa in si fiican loo biyo raaciyaa biyaha oo googoynaya 8 qaybood;
toon u kala qaybsanaa toon, dhoobo;
maadada maaddooyinka wax lagu duubo ama waxsoosaar hilib ah oo lagu rido dhalada 3-litir dhalada;
Ku shub walaaqda biyo qandac ah oo la kariyey si qoorta loogu dhigo kusaddii, kuna dhaw dabool caag ah;
sii wad isku dar ah heerkulka qolka muddo seddex maalmood ah, waa in la kariyaa maalin kasta;
marka uu dhacayo, waxa ku jira sheyga waa in la sifeeyo oo la cadaadiyaa;
Hoos-u-dhalinta soo go'ay waxaa lagu keydiyaa qaboojiyaha.
Waxaan soo bandhigi karnaa daawashada fiidiyowga oo ku saabsan daawada elixir ah ee toon iyo liin:
Sida loo cabbo faleebo si loo nadiifiyo jirka?
Cabbir faleebo ah 100 garaam 3 jeer maalintii maalintii cuntada. Mid ayaa ku filan 10 maalmood. Kooraska soo dhaweynta - 40 maalmood.
Looma baahna in aad daawada markasta daawo u hesho.. Waxaa lagama maarmaan ah in loo diyaariyo faleebo sida loo baahdo, si aysan u lumin guryaha guryahooda inta lagu jiro kaydinta mudada dheer.
Isbeddelada kala duwan ee roodhida
Caawinta maraakiibta toonta iyo liinku kuma koobna hal cuntooyin caadi ah. Dadku waxay la yimaadaan kala duwanaansho badan oo daawadan ah.
Sida loo nadiifiyo tincture jidhka oo leh aalkolo?
Si ka duwan qajaarka caadiga ah, liin lama isticmaalin halkan, 40 g oo kaliya ah ayaa loo baahan yahay, 100 ml oo khamri ah ayaa loo qaadaa halkii biyo ah. Daroogada ayaa ku adkeysanaya 10-14 maalmood iyo filter.
Qaado 3 jeer maalintii, 10 dhibcood nus saac ka hor cuntada.
Waxaan soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyowga ku saabsan diyaarinta faleebo bogsiin leh oo ku saabsan khamriga:
Iyadoo saliidda qadhaadh leh
Cuntadani waxa kale oo ka mid ah malab oo ka caawisa maaha kaliya in la nadiifiyo maraakiibta, laakiin sidoo kale si loo hagaajiyo habka difaaca jidhka, sii dheereeyso dhalinyarada iyo caafimaadka.
Si aad u diyaariso walxahaas ayaa u baahan:
Afar madax oo toon ah;
1 kg oo malab ah dareere;
200 ml oo saliid ah.
Xardho maaddooyinka ugu muhiimsan, ku dar malab iyo subag, isku walaaq, ku rid galaas ama saxan macaan.
Isku dar waxaa lagu shubaa 10 maalmood gudahood mugdi aan lahayn dabool. Daawada waa in la qaataa subaxa 30 daqiiqo cuntada ka hor..
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan isticmaalka faa'iido malab, liin iyo toon loogu talagalay mashiinka nadiifinta ee maqaalkan.
Maaddooyinka laga soo qaato qaacidada caadiga ah waxay ku darsadaan asal yar yar.
Si aad u diyaariso daawada, waxaa lagama maarmaan ah in la isku daro walxaha oo dhan, ku rid digsi bir ah, ku shub laba litir oo biyo nadiif ah, isla markaana si joogto ah u walaaq, u karkar.
Ka dibna waxaad u baahan tahay inaad ka soo qaaddid walxo kariyaha, qabow iyo cadaadis iyada oo loo marayo joodariga ama dharka dharka leh.
Cabitaanka waa in lagu kaydiyaa qaboojiyaha weelka dhalada leh dabool leh. Waa lagama maarmaan in la cabo daawada hal mar maalintii ka hor quraacda..
Waxaan soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyowga sida loo diyaariyo isku dar ah liinta, toonta iyo galmada:
Waxaad ka akhrin kartaa wax badan oo ku saabsan isticmaalka isku-dar ah toon oo leh santuuqa si aad maraakiibta u nadiifiso maqaal gaar ah.
Cabitaanka cas cas
Qodobkan, lumaha mar dambe looma isticmaalo, toonta ayaa loo baahan yahay xaddiga 12 xabo, iyo casaan cas - mugga 700 ml.
Khudrado burbursan waa in loo wareejiyo weel dhalada mugdi ah, ku shub khamriga, si adag u xir daboolka.
Isku dariddu waxay u dhexeysaa 14 maalmood.
Maalin ka dib, waxyaabaha ku jira dhalada waa in la ruxaa.
Qaado daawada aad u baahan tahay hal shaaha ah saddex jeer maalintii kahor cuntooyinka.
Wax badan ka baro mashiinka nadiifinta adoo isticmaalaya tinctures of tufaaxa cas cas, iyo sidoo kale khamriga ama vodka, ka raadso waxyaabo kala duwan.
Imisa maalmood iyo sida loo qaato tincture?
Cuntadani waxay leedahay sifooyin gaar ah iyada oo la raacayo habka codsiga.. Garlic iyo malab waxaa badanaa la qaataa ka hor ama ka dib cuntada. Tani waxay sabab u tahay joogitaanka alaabtan oo ah tiro badan oo ah xannibaadda darbiyada caloosha ee walxaha.
Cunista daawada leh qaadashada cuntada waxay ku siinaysaa fursado dheeraad ah oo aad ku barbardhigto qaybaha faa'iidada leh ee ka soo baxa, sidoo kale waxay ka ilaalisaa caloosha ka timaadda waxyaabaha cuncunka leh.
Koorsada daaweynta waxaa loo xushay si gooni ah waxayna soconaysaa 10 ilaa 40 maalmood.
Xaaladaha qaarkood, qaadashada daroogooyinka ayaa sababi kara dareen diidmo, madax xanuun, xanaaq. Sidoo kale, toonta iyo liin - alaabooyinka keeni kara xasaasiyadda qaabka guduudasho iyo finan.
Miyaan u baahanahay inaan ku celiyo daaweynta?
Waxyaabaha daawada ee ku salaysan toonta iyo liinku waxay saameyn xooggan ku leeyihiin gobolka ee xididdada dhiigga iyo xididdada dhiigga, sidaa darteed, daaweynta ama daaweynta waa in lagu soo celiyaa wax ka badan sanadkiiba mar. Ka hor intaadan marin kooraska koorsada, waa inaad la tashataa takhasusle..
Sidoo kale boggayaga internetka waxaan ka wada hadalnay siyaabo kale oo lagu nadiifiyo weelasha toonta. Akhri sida loo sameeyo sidan oo kale iyada oo la adeegsanayo isugeynta caanaha iyo toonta, waxay noqon kartaa midkani.
Tincture daawada toonta iyo malab - qalab awood leh oo sii dheereynaya nolosha. Hantida nadiifinta maraakiibta looma barbardhigi karo cuntooyinka kale ee daawada dabiiciga ah. Si kastaba ha noqotee, dawadani waxay leedahay waxyaalo badan oo ka hortag ah, ka hor intaanad nadiifin jidhka adigoo isticmaalaya gargaarka, adigoo isticmaalaya cuntooyinka kor ku xusan, waa inaad la tashataa dhakhtarkaaga.
Abaalmarin ballaadhan waa noocyada kala duwan ee yaanyada boogie woogie f1: sawirrada, sharaxaada iyo talooyinka koraya
Sida loo koro nemesia abuur
Maxaa dhacaya haddii digaaggu leeyahay bacrimis? Sidee loo daweeyaa boogta faafa?
Talooyinka ugu sareeya ee calamondin sii koraya guriga
Trillium waa warshad dilis ah oo koraysa duurka ku yaal Bariga Aasiya iyo Waqooyiga Ameerika. Maaddaama muuqaalkeeda quruxda badan ee quruxda badan, trillium ayaa ku faafay qaybo kala duwan oo dunida ah waxaana loo isticmaalaa qaabka qurxinta ee naqshada muuqaalka. Qodobkan waxaan tixgelin doonaa sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan trillium, noocyada kala duwan, iyo sidoo kale xeerarka aasaasiga ah ee beerto iyo daryeelidda warshad. Read More
Muffins (boqoshaada): noocyada